Chakarebesa Journey By Electric Skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
Chakarebesa Journey By Electric Skateboard
Chiri kupinda kusvika padanho zvinoda vamwe chakakomba utsanzi kumira kunze mukati yemagetsi skateboard nzvimbo; nzira yakafanana rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking uye nemavhiri Motors. The kuzvidzora Wireless kure zvaigona afunga zvishoma ane simba pamwero sezvo zviri zvakaitwa hutera epurasitiki uye anonzwa zvakanaka chisingakoshi. Kazhinji, mutasvi wemagetsi skateboard ndiko kurayira bhodhi uye zviri kutanga uchishanda huru pamwe kure utariri kumuita kudzora uye waidzora kumhanya. Kunetesa iwe kusunda chikungiso mberi pamusoro Handheld kure. In ezvinhu akadaro, chete chichapedziswa ndiko kuenda nzvimbo iri hwatata pasi uye kunotadzisa iwe kubva kuwana zvakaipa kunyange vanofanira ukapfugama. Chii chinoita akatasva kunyange crazier uye imwe kunonakidza ichokwadi kuti anogona kuenda pamukwidza uye downhill pasina dambudziko, saka iwe Podràs rwendo pamwe kunevamwe chaunoda. The kumusoro ari KV, kuti nokukurumidza iyoyemagetsi skateboardachadzinga. Mavhiri ari ichi yemagetsi skateboard zvinoitwa kubva rabha chinogona kushandiswa iri chero mhando mamiriro enzvimbo.
Uye kuwedzera siyana dzemagetsi Skateboards tout kumhanya kwavo (vamwe achaita zvakanaka pamusoro makiromita 20 paawa), kutsanya kumhanyisa, vakawanda mabhiza modes, uye sturdiness kana vakaisa avo azere paces kana kutorwa kure-mumigwagwa. Saka kana uri munhu rinoda munhu rinopedza chete nyore, ipapo KOOWHEEL dzemagetsi Skateboards vachasangana zvirevo zvenyu. Saka, kuramba kuti mupfungwa, takanga tiri kazhinji kufara kuona kana Koowheel yemagetsi skateboard chizvarwa chechipiri Kooboard akasimbisa kubva ikoko. Yokutanga yemagetsi skateboard ezvidzidzo zhinji kuchengeteka kudzivirira zvinhu nokuda mutasvi.
Chaizvoizvo, akamedura chinhu rokuzvivandudza rakaita kuti irambe hurongwa kuti kunodyira bhatiri. Tiri yemagetsi skateboardgeeks. For makumi emamiriyoni netsoka, mumwe skateboard chinhu kunonakidza uye musoro nezvechisarudzo kuyambuka mirefu marefu nokukurumidza uye chengeta kure kuora mwoyo kunoita gridlocked motokari kana rakawandisa uye va neudhadha zvifambiso. Asi, pane imwe zvachose chose marapirwo, uye kuti kunyatsotaura nyaya pano chaipo. Vapedza pedyo maawa 200 kutsvakurudzwa inonyatsobudirira mavanga uye yokutevedzera pamusoro kumusika, takatenga pamusoro 10 mapuranga ari pamusika yakakodzera ichi uye azviongorora zvinogonekwa-ne-divi kuzoshora kubuda izvo e-skateboard chaizvoizvo nhungamiro vose! Kana uchida kuwana zvakanaka chete, China ndiyo nzvimbo kutarisa. Nepo zvirongwa zviri munzvimbo kukurambidza kukwira anokuvadza inongoda, mutasvi anofanira kunzwisisa kugona bhodhi iri rinogona inofanira kuremekedzwa nokuda kuchengetedzwa kushandiswa. Zvisinei, zviri dzose nguva chirongwa yakanaka chaizvo kuti anyatsotaura chizvarwa mitemo nemirayiro pamusoro akatasva bhodhi rako kana iwe Rwendo nayo uye kubvumira yakawanda mamwe nguva kuchengeteka kana muchikwanisa rwendo pamwe wako E-skateboard. Zvinotora chete mana nemashanu nemaminitsi kunodyira bhodhi pamwe nokukurumidza mundiro.
Post nguva: Feb-23-2018